Inona ny Pathfinder ao amin'ny Illustrator sy ny fomba fiasa | Famoronana an-tserasera
Illustrator dia iray amin'ireo fandaharanasa be mpampiasa indrindra amin'ny mpamorona sary noho ny fiasa maro sy ny fampiasa an'io. Ny iray amin'izy ireo, ny Pathfinder, angamba iray amin'izy ireo fanta-daza indrindra amin'izy ireo, indrindra amin'ny raharaha miasa miaraka amin'ny volo.
Raha manomboka eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary ianao ary te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny Pathfinder ao amin'ny Illustrator, eto izahay hiresaka momba azy io ary hanome anao ohatra ny fomba fiasa sy izay ho azonao amin'izany.
1 Inona ny Pathfinder ao amin'ny Illustrator
2 Inona no ilàn'ny Mpisavalalana Illustrator?
3 Ny bokotra Pathfinder
4 Ny fiasan'ny Mpisavalalana Illustrator
Inona ny Pathfinder ao amin'ny Illustrator
Ny Pathfinder dia fitaovana iray ao anatin'ny programa Adobe Illustrator. Izy io dia mifantoka amin'ny famoronana tarehimarika vaovao, mifototra amin'ny iray am-boalohany na izay noforoninao. Mba hanaovana izany dia ampiasao ny bokotra toy ny fitambarana, fiankinan-doha, mamafa vola sns. hahazoana fomba vaovao. Raha ny marina dia io no be mpampiasa indrindra mamorona vorona, fa raha ny tena izy dia azonao ampiharina amin'ny karazana sary izany.
Ao anatin'ny programa dia manana laharana roa ny fizarana mpandeha. Amin'ny voalohany dia hahita marika efatra ianao, izay ny maody endrika, manatevin-daharana / manampy, mihena eo aloha / esorina, ampidiro ary esory. Ary ireto kisary manaraka ireto amin'ny tsipika faharoa dia mifanaraka amin'ny inona ny fiasan'ny: mizara, manapaka, manambatra, manapaka, kely ny fiaviany ary ny drafitra.
Ny iray amin'ireo ohatra tsara indrindra azonay omena anao ary azo tanterahina amin'ny mpandeha dia mety ho collage. Izy io dia voaforon'ny sary marobe izay nopetahana ary nendahina tamin'ny fomba iray mihitsy aza, ary mitazona ireo sary mandrafitra azy ao anatiny.
Inona no ilàn'ny Mpisavalalana Illustrator?
Fantatrao izao hoe inona ny Illustrator's Pathfinder, angamba ny fanontaniana manaraka azonao apetraka amin'ny tenanao dia ny momba ny asany, izany hoe, inona ity fitaovana ity afaka manampy anao hihatsara amin'ny volavolanao. Ary manokana, ny zavatra hainao atao miaraka aminy dia zavatra maromaro, ao anatin'izany:
Mizara. Izany hoe afaka manapaka ny sary amin'ny sombin-javatra tadiavinao ianao, amin'ny fomba ahafahanao manasaraka azy ireo nefa tsy misy fiatraikany amin'ny endrika sisa. Ohatra, satria te hanova ny loko fotsiny ianao amin'ny ampahany amin'ilay sary fa tsy amin'ny rehetra.
Hetezo, hetezo ary hanambatra. Amin'ity tranga ity dia miresaka fitaovana telo isika. Ny fanapahana dia manondro ny fanesorana ny ampahany amin'ilay sary izay iarahanao miasa. Etsy ankilany, ny fampifangaroana, dia ahafahanao miditra amin'ny zavatra na sary isan-karazany ilainao hamoronana iray manontolo. Ary miasa ilay fitaovana fanapahana, araka ny tondroin'ny anarany, mba hanapahana ny ampahany amin'ilay sary mba tsy hahitana ny valiny farany.
Contour. Ny fitaovana Stroke dia mitovy amin'ny fitaovana Divide, fa amin'ity tranga ity dia ampiasain'ny fizarana tsy miankina izy io.
Kely fiaviana. Alao an-tsaina hoe manana sary manana fiaviana be ianao, ary tsy mila izany firy. Eny, izany no karakarain'ity fitaovana ity, manala ny ambadika be loatra izay ao aoriany, etsy ambony sy eo alohan'ilay tarehimarika tianao hotehirizina.
Ny bokotra Pathfinder
Ho fanampin'izay azonao ampiasaina azy io dia tokony hahafantatra bebe kokoa momba ny mpandeha amin'ny lalana Illustrator ianao. Noho izany, hazavainay etsy ambany hoe inona ny bokotra an'ity fitaovana ity. Raha ny marina dia hisy efatra:
Manampia ary mampiray. Izy io dia fiasa iray ahafahana mampiditra zavatra vaovao ary raha mampitambatra azy dia inona no ataony dia lasa iray ireo zavatra roa ireo.
Tsy dia aloha. Ny zavatra ataony dia esory izay eo alohan'ilay zavatra sy eo ambaniny.
Kely fiaviana. Ny zavatra ataony dia manala, tsy mitovy amin'ilay teo aloha, izay eo alohan'ilay zavatra, izay ao aoriany sy eo an-tampony.
Mamorona fihaonan-dàlana, izany hoe mamorona zavatra vaovao ianao miaraka amin'ilay ampahany izay mifanindry ireo tarehimarika roa (na mihoatra), ka manala izay rehetra tsy voakitika.
Manilika. Tadidinao ve ny bokotra teo aloha? Eny, eto ianao dia hanao ny mifanohitra amin'izay, ny nesorina dia ireo faritra mifanindry, fa ny ambiny sisa.
Ny fiasan'ny Mpisavalalana Illustrator
Ankehitriny rehefa fantatrao ny zavatra rehetra azonao atao, dia azo inoana fa tianao ny hanandrana azy amin'ny zavatra, sary, sary ... Voalohany indrindra, tsy maintsy manam-paharetana ianao satria tsy fitaovana mora ampiasaina izy io, ary mety ho sarotra ny manome amin'ny voalohany miaraka amin'ny valiny antenainao. Na izany aza, amin'ny fikirizana dia azonao atao ny manatratra azy.
Hanombohana azy dia tsy maintsy fantatrao fa "manokana" ity fitaovana ity, raha tsy izany, avy amin'ny Illustrator, izany hoe avy amin'ilay programa nahitanao azy. Misy programa hafa mety manana fitaovana mitovy amin'izany, saingy tsy hitovy amin'ny tiana hambara.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra ny sary, na sary, izay tianao hiasa. Mamporisika anao izahay hametraka azy ireo amin'ny sary iray ihany mba hiasa amin'izy ireo, raha maromaro izy ireo, na iray.
Ho hitanao ny fitaovana mpandeha satria ao amin'ny ampahan'ny Window - Pathfinder no misy azy. Na dia azonao atao aza ny "miantso" azy amin'ny fanalahidy Control + Shift + F9. Ity dia hanokatra menio ao amin'ny tontonana izay ahafahanao manana safidy isan-karazany amin'ilay mpandalana lalana (Precision, Esory ireo teboka miverimberina ary ny baiko mizara sy ny contour dia manafoana ny sary tsy misy ranomainty). Azonao atao ny manefy azy araka izay itiavanao azy. Fa raha tsy mazava aminao ny anton'ireto safidy ireto dia hazavainay aminao:
Precision: ny Precision dia ahafahantsika manana teti-dratsy marimarina kokoa na latsaka. Izany hoe, miseho bebe kokoa na latsaka. Noho izany, azonao atao ny mandray azy amin'ny 0,001 ka hatramin'ny 100 isa, miankina amin'ny zavatra ilainao isaky ny tetikasa.
Esory ireo teboka miverimberina: Raha ity safidy ity dia ampiasaina mba hamela ireo teboka mifanindran-dàlana amin'ireo sary samihafa na hanafoanana azy ireo, ka mihazakazaka kokoa ny sary.
Zaraina sy soraho ny baiko hamafana ny sary tsy misy ranomainty: ny safidy farany dia manondro ny mety hialana amin'ireo zavatra tsy feno na kapoka.
Vantany vao vita ny fametrahana ny zava-drehetra araka izay itiavanao azy, dia ho tonga ny fotoana hampiasana ireo bokotra samihafa amin'ilay fitaovana hamolavolana ny tetikasanao. Amin'ity tranga ity, mamporisika anao izahay hanao kopia maromaro amin'ny volavolanao mba hahitana ny endriny amin'ny valiny samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Inona ny Pathfinder ao amin'ny Illustrator sy ny fomba fiasan'izy io